बेसार अनुहारमा लगाउनुका लाभहरू। - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 11:12
औषधिय गुणहरु भएको बेसार हाम्रो स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन छालाको लागि समेत उत्तम मानिन्छ यससँगै स्वाद र रंग बृद्धि गर्न तरकारीमा राख्ने गरिन्छ। साथै बेसार र दूध चिसो हटाउन र प्रतिरक्षा शक्ति बढाउनको लागि समेत प्रयोग गर्न सक्छौ । हामी सबै हाम्रो जीवनमा बेसार दैनिक प्रयोग गर्दछौं। तर के तपाईंलाई थाहा छ बेसार सबै प्रकारका छालाको लागि लाभदायक हुन्छ र यसले छाला सम्बन्धी सबै समस्याहरू पार गर्न मद्दत गर्दछ।
बेसारमा कक्र्यूमिनमा एन्टीइन्फ्लेमेन्टरी, एन्टिआक्सिडन्ट, एन्टिसेप्टिक र जीवाणुरोधी गुणहरू हुन्छन र यही कारणले गर्दा बेसार धेरै सुन्दरता र डर्मेटोलजी सम्बन्धित उत्पादनहरूमा प्रयोग भएको छ। बेसारले अनुहारमा हुने पिम्पल्सहरू हटाउन पनि मद्दत गर्दछ। बेसारले अनुहारको दाग मात्र हटाउँदैन, अनुहारमा उज्यालो ल्याउँने काम गर्दछ।
यसैले विवाहको अघि दुलहा र दुलहीलाई बेसार लगाउँने चलन छ। तर यदि तपाई बेसार अधिकतम एवंम लामो समयको लागि धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसले केही साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन पनि सक्छ। यस लेखमा हामी तपाइँलाई बेसारको लाभ र हानि दुवैको बारेमा विस्तारमा बताउँछौं।
१. बेसारले अनुहारमा चमक ल्याउँन मद्दत गर्दछ ।
बेसारमा एन्टीआक्सीडन्ट र एन्टीइन्फ्लेमेटरी पर्दाथ हुन्छ जसले तपाईंको छालालाई स्वाभाविक रूपमा चमक दिन र हराएको छालामा चमक ल्याउँनको लागि मद्दत गर्दछ। घरमा औषधीत्मक गुणहरूको साथ विशेष बेसार को फेस मास्क बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागी तपाईसँग बेसार दहि मह आवश्यक पर्दछ। सुरुमा थोरै दहि र महलाई आधा चम्चा बेुसारसँग मिसाउनुहोस र पेस्ट बनाएर र यसलाई फेसमा लगाउन सकिन्छ र १५ मिनेट पछि धुनुहोस त्यस पश्चात बिस्तारै तपाइको फेसमा चमक आउन थाल्छ।
२= बेसारले एक्ने समस्या हटाउँछ ।
यदि तपाइँको छालामा बारम्बार समस्या हुन्छ र धेरै क्रीम, लोशन र उपचार गर्दा पनि निको भएको छैन भने तपाइँ यी रासायनिक उपचारहरूको सट्टा प्राकृतिक विधि अपनाउनु पर्छ जसको लागी बेसार उत्तम हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा बेसारको प्राकृतिक फेस प्याकले तपाईंलाई एक्नेको समस्या हटाउन मद्दत गर्दछ।
यसको लागि तपाईंलाई दहि थोरै मसिनो माटो, गुलाब पानी र बेसार लाई मिश्रण गरेर मास्क बनायर लगाउँन सक्नुहुन्छ। यसरि थोरै माटोमा दहि, गुलाब पानी र थोरै बेसार फीटेर पेस्ट बनाएर १५ मिनेट नसुक्दा सम्म लगाउँन सक्नुहुनछ। यसपछि चिसो पानीले धुन पर्दछ। यसरी हप्तामा २ पटक लगाउँदा यो मास्कले एक्नेसँग लड्न मद्दत गर्दछ।
३. बेसारले रिंकलहरू वा चाउरिपना पनि हटाउँदछ ।
यदि, तपाइको उमेर बढेसँगै फेसमा रिंकलहरु देखा परेको छ भने बेसारले तपाईंलाई यी समस्याहरू पार गर्न मद्दत गर्दछ। बेसारले छालाको बनावट सुधार गर्दछ, अनुहारमा चाउरिपन कम गर्दछ। यसको लागि अनुहारमा दहि, कागतीको रस र थोरै बेसारको पेस्ट बनाएर लगाउँदा उत्तम हुन्छ। यो पेस्टलाइृ करिब १० वा १५ मिनेट लगाएर फेस पखाल्ने र मोईस्चराईजर लगाउँदा अनुहारको चाउरि हराउदै जान्छ।
४. बेसारले अनुहारमा स्किन इरिटेसन कम गर्दछ ।
प्राय मानीसहरूको छाला धेरै संवेदनशील हुन्छ, र यसको कारणले गर्दा छाला चिलाउने पोल्ने र फुट्न सक्छ । तपाईं यस्तो समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने बेसार र एलोवेरा जेल मास्कले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ। यसको लागी तपाईले थोरै बेसार, आधा चम्चा एलोभेरा जेल मिसाएर पेस्ट बनाई अनुहारमा २० मिनेट सम्म लगाएर चिसो पानीले धुनुहोस। यसरि एक हप्तामा २ पटक लगाउँदा फेस चिलाउने फुट्ने समस्या हट्छ।
५.बेसारले दाग र घाउहरू निको पार्छ ।
माथी भनेझै बेसारमा एंटीइन्फ्लेमेटरी तत्वहरू हुने गर्दछ जसले छालाको प्वालहरू सफा गर्न मद्दत गर्दछ। यस बाहेक बेसारमा एन्टीसेप्टिक गुणहरू पनि हुन्छ जसले अनुहारमा कुनै दाग, घाउ वा चोटहरू हटाउन मद्दत गर्दछ। यसको लागि १ चम्चा चनाको धुलो मलाई घोलेर घाउँ वा चोट भएको ठाउँमा २० मिनेट सम्म लगाउदा निको हुन्छ।
६. बेसारले सुक्खा छाला नरम बनाउँदछ ।
धेरै पटक अनुहारमा मो‘इश्चराइजर लगाए पछि पनि छाला सुख्खा देखिन्छ भने यस समस्याको समाधान गरन बेसारले तपाईलाइ मद्दत गर्दछ । यसको लागी थोरै बेसार, चन्दा पाउदर र दुध मिसाएर फेस प्याक बनाएर २० मिनेट लगाइसकेपछि नुन पानीले पखाल्न सकिन्छ । जसले गर्दा छाला नरम र कोमल हुन्छ।
छालामा बेसारको साइड इफेक्ट
यदि बेसार पूर्णतया प्राकृतिक छ र यसलाई अनुहार वा छालामा कहिँ पनि लगाउँदा कुनै हानि गर्दैन । यसको बाहेक, तपाईंले यो याद गर्नुर्पनेछ कि छालामा बेसार लगाईसकेपछि, पहेंलो दाग वा बाँकी अवशेष रहन्छ। यो एकदम सामान्य हुन्छ तर यदि तपाईंलाई बेसारको एर्लर्जी छ वा कुनै प्रकारको छालाको एर्लर्जी छ भने, डाक्टरको सल्लाह बिना अनुहारमा बेसार नलगाउनुहोस अन्यथा यसले छाला फुट्ने चिलाउने समस्या निम्त्याउँदछ।
यसरी तपाईले बेसारको पेस्ट बनाइ अनुहारमा २ घण्टा सम्म लगाएर परिक्षण गर्दा केहि नकारात्मक प्रतिक्रिया नआएमा निर्धक लगाउन सक्नुहुनछ ।